Date My Pet » Five Online Dating Profile Blunders To Dzivisa
Last updated: Jan. 22 2020 | 2 Maminitsi verenga
Panyaya paIndaneti kufambidzana, wako kufambidzana Profile vachishoropodza. Unofanira nechokwadi wakambotamba kusanganisira zvose zvakakosha mashoko ari nezvako asi Munoda kuti irambe yakachena uye zvinofadza. Shure kwezvose, Munoda kumira panze!
Heano mazano pane chii kudzivisa Posting uri paIndaneti kufambidzana Profile:
Bad / Kukodzera Photos
Ngatimbotaurei zvazviri-pakutanga zvinhu zvose uye kana wako Profile photos mufananidzo wenyu shotgunning doro kana flipping kubva kamera, unogona pakuzvidzivirira zvinogona misi. Kunyange kana iwe kutanha zvakawanda zvakakodzera photos, edza tichidzivisa mifananidzo vari blurry, kuti vari kure kuti haugoni kuona chiso chenyu kana nemi kupfeka Sunglasses. A nyore Photo kwamuri kunyemwerera chaizvo anoita zvishamiso.
Kakawanda Spelling uye Girama Zvikanganiso
Haasi munhu wose ane girama ndizvirumbidze uye kuti Shuwa yakanaka. zvisinei, kana wako Profile yakazara chiperengo uye girama zvikanganiso, vanhu vangave aunombodarika yako Profile pasina wechipiri kufunga. Mhanyai kumboenda nezvitsinga cheki kuburikidza kwenyu Profile kubata chero zvikanganiso zvikuru. Ndingada Uyewo pfungwa kwete kushandisa rugwaro abbreviations uye lingo (akadai "muUri" pane kuti "yenyu" kana "BC" pane kuti "nokuti") sezvo vako vanoda yenyu Profile kuva akajeka uye zvipfupi sezvinobvira.
Airidza Like Wose Else
Matani vanhu vanoda kuverenga, famba, kuenda kufirimu, kushandisa uye kubuda chisvusvuro. Kana muri wakazadzwa pamusoro zvimwe zvinhu, kufanana parwendo, nekutatamura zvakawanda nezvokuti nei uchifarira here, apo iwe wanga uye kupi uchida kuenda. Inogona kukubatsira kuva kukurukura Starter kana kupa zvishoma zvakadzama. Unogonawo kuedzawo kutaura zvakawanda zvinhu akasiyana nezvako. Hey, hauzivi ndiani mumwe anogona kuda zvehari zvidzidzo kana Spelunking!
Kunyepa About Small Details
Zvinonzwisisika kuti uchida showcase zvaunogona unhu rako Profile asi avete pamusoro pachedu mashoko, kunyange vaduku, ipfungwa dzakaipa. Kunyepa pamusoro kukwirira yako, uremu hwako kana kunyange zera rako irege sokuti pakutanga sezvinoita hombe, asi kana imi pakupedzisira vanosangana aine musi wawasangana paIndaneti, vangangodzingwa zvakamushamisa uye kutanga kunetseka pamusoro chiizve iwe uchinyeperwa pamusoro. Kuvimbika ndiyo yakanakisisa nomutemo.
Kutaura Too Little kana Zvakawandisa
Hapana anoda kuverenga pfupi yokufungidzira kana uchiverenga paIndaneti kufambidzana Profile. Apo Profiles vari yakarebesa, vanhu vakawanda vanowanzoda zvimiti munzeve uye tinya unotevera Profile. The Ndizvo zvingataurwawo nokuda Profiles kuti uri mupfupi. A Profile nezvechiratidzo pachako rimwe kana maviri mitongo kunogona kukuita kutarira nezviri. Kuwana svikiro akakwana pakati maviri ndiwo anokosha, saka ramba Profile hwakadzama uye kusvika.